‘‘ကိုယ်နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဗီရာကိုထိုးသတ်ဖို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း။”
10/06/2019 mayoo 0
‘‘ကိုယ်နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဗီရာကိုထိုးသတ်ဖို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း။” မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ခါးပတ် ကာကွယ်ပွဲကို အကောင်းဆုံး ထိုးသတ်ပြီး ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီ .ဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ဟာ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း. ချန်ပီယံခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲအတွက်လည်း ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လျှက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ လိုက်ဟဲဗီးဝတ်တန်းချန်ပီယံခါးပတ်ကို အောက်တိုဘာ ၁၂ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား ဟဲဗီးဝိတ်တန်းက Continuous reading
ပဲမျိုးစုံဈေးကွက် အေးနေ၊ ပဲအချို့ဈေးဆက်ကျ ။ ။
ပဲမျိုးစုံဈေးကွက် အေးနေ၊ ပဲအချို့ဈေးဆက်ကျ ။ ။ နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၅ - သည်တစ်ပတ် ပဲမျိုးစုံဈေးကွက်ကတော့ အရမ်း တက်မလာဘဲ အေးနေပြီး တချို့ ပဲတွေဆို ဈေးဆက်ကျနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပဲစင်းငုံနီ(သစ်) ၂ဝပိဿာဝင် တစ်အိတ်ကို အရင်တစ်ပတ်က ကျပ် ၃၃,ဝ ဝဝ ကို Continuous reading
ပွင့်ဖြူမှ ချို့တဲ့သော ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်ပို့စ်မှာ ယမန်နှစ်က ဖြစ်ကြောင်း ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဆို
10/06/2019 lin htet 0
ပွင့်ဖြူမှ ချို့တဲ့သော ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်ပို့စ်မှာ ယမန်နှစ်က ဖြစ်ကြောင်း ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဆို မကွေး၊ ဇွန် ၁၀ ။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပွင့်ဖြူမြို့နယ်မှ ချို့တဲ့သော ဂုဏ်ထူး ၅ ဘာသာရှင်မှာ ယမန်နှစ်က ပို့စ်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ဆေးကျောင်းတက်ရောက်နေကြောင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူ ဦးဝင်းမြိုင်သန်းထံမှ သိရသည်။ Continuous reading
ကောင်လေးတစ်ယောက်က သင့်ကို Crush နေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက်များ ။
ကောင်လေးတစ်ယောက်က သင့်ကို Crush နေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက်များ ။ ( ၁ ) စကားစပြောတယ် ။ သင့်ကို စကားလာပြောတာက သင့်အတွက်အချိန်ပေးတယ်၊ သင်နဲ့ရင်းနှီးချင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ ပျင်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို Message ပို့တဲ့အခါ သူ့စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့သူက သင်ဖြစ်နေတယ်၊ Continuous reading
စားလို့ရတဲ့ ရေသီး တွေ နဲ့ ပလတ်စတစ် သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်တော့မယ် ။ ။
စားလို့ရတဲ့ ရေသီး တွေ နဲ့ ပလတ်စတစ် သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်တော့မယ် ။ ။ စားလို့ရတဲ့ ရေ ဆိုရင် အတော်လေး စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အရွယ်စုံ ခပ်ပျော့ပျော့အလုံးလေးတွေထဲ အရသာရှိတဲ့ detox water ထည့်ထားပြီး အလွယ်တကူ သယ်သွားလို့ရမယ်။ ရေဗူးတွေလိုမျိုး သောက်ခါနီး အဖုံးဖွင့်စရာမလို Continuous reading
မိန်းမတွေက ဈေးကြီးလို့ ဆိုပြီး ကြက်မကို မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
မိန်းမတွေက ဈေးကြီးလို့ ဆိုပြီး ကြက်မကို မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ကင်ညာ နိုင်ငံက Kevin Simonyi ဆိုသူ အမျိုးသား တဦးက ကြက်တကောင် ကို မဖွယ် မရာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒါကို ကြက်ပိုင်ရှင်က လက်ပူး လက်ကြပ် မိခဲ့ ပါတယ်…. ကြက်ပိုင်ရှင်က Continuous reading
တောင်ငူမြို့က စေတီဌာပနာဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရ၊ တရားခံများကို မဖမ်းမိသေး
တောင်ငူမြို့က စေတီဌာပနာဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရ၊ တရားခံများကို မဖမ်းမိသေး ဖောက်ထွင်းခံရတဲ့ ဥမင်တောရကျောင်းကစေတီကို တည်ထားကိုးကွယ်ထားတာ တစ်နှစ်ကျော်ကာလသာရှိသေးပြီး ယခုပျံလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့ ယခင်ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးက တည်ထားခဲ့တာပါ။ တောရဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ စေတီတစ်ဆူကဌာပနာများကို ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဇွန်လ (၆)ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူမြို့နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ယခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပက်သက်ပြီး တရားခံများကို ယနေ့ထိ စုံစမ်းဆဲဖြစ်ကာ ဖမ်းမမိသေးကြောင်း တောင်ငူမြို့နယ် ထုံးဘိုရဲစခန်းကနေ Continuous reading
ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်ကို ကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့ လင်းလင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ …
ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ငါးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်ကို ကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့ လင်းလင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ … ချိုမြိန်လွန်းလှတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ စိတ်ထားကောင်းသူတွေမို့ တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အလှူတွေပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးပါ။ သမီးလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်တို့နာမည်နဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ ခေတ်သစ် ဖောင်ဒေးရှင်းကနေလည်း ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ကလေးတွေကို ကုသပေးနေတာပဲ Continuous reading
ရန်ကင်းအိမ်ရာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် တိုက်ခန်းအကျယ်အဝန်း ၆ဝဝ စတုရန်းမီတာနှင့် ၇ဝဝ စတုရန်းမီတာ အစားထိုးပြန်ပေးရန် တိုင်းအစိုးရစီစဉ်ထား ။
ရန်ကင်းအိမ်ရာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် တိုက်ခန်းအကျယ်အဝန်း ၆ဝဝ စတုရန်းမီတာနှင့် ၇ဝဝ စတုရန်းမီတာ အစားထိုးပြန်ပေးရန် တိုင်းအစိုးရစီစဉ်ထား ။ ရန်ကုန်အိမ်ရာ ပြန်လည်ဆောက်ရာတွင် ရန်ကင်းနေပြည်သူများအား တိုက်ခန်းအကျယ်အဝန်း ၆ဝဝ စတုရန်း မီတာ၊ ၇ဝဝ စတုရန်းမီတာတို့ဖြင့် အစားထိုးပြန်လည်ပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက စီစဉ်ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ရန်ကင်းအိမ်ရာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအစည်းအဝေးကို Continuous reading
သင်မသိသေးတဲ့ ကဖင်းဓာတ်အကြောင်း ။ ။
သင်မသိသေးတဲ့ ကဖင်းဓာတ်အကြောင်း ။ ။ ကော်ဖီမကြိုက်တဲ့ သူဆိုတာ ခပ်ရှားရှားပါ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း ကော်ဖီကြိုက်ပေမယ့် ရင်တုန်တာကို မခံစားနိုင်လို့ ဒါမှမဟုတ် ကော်ဖီကို ရှောင်ကို ရှောင်မှဖြစ်မှာမို့ မသောက်ရတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတာပေါ့လေ။ ကျန်းမာရေး သုတေသီတွေ ရဲ့ စစ်တမ်းကောက်ချက်အရ နိုင်ငံတကာက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ Continuous reading